Nhau - Shongwe crane ichirova mhete kutadza kudzivirira matanho uye kugadzirisa
Iyo slewing inobata mashandiro eshongwe kireni inowanzo kuverengerwa neyekucheka kubereka, slewing drive uye yepamusoro uye yepasi tsigiro. Iyo shongwe kireni slewing inotakura gungano mune yekushanda maitiro inowanzo kuve isingaite oparesheni uye ruzha runopfuura chiyero (chisina kujairika ruzha) kukanganisa. Munyori akabatanidzwa neruzivo rwake rwekushanda kubva kuslewing kubereka, yekucheka mashandiro uye kucheka kutakura zvinokanganisa zvakateerana, mukugadzira, gungano kuyedza, kugadzirisa michina uye zvimwewo zvezvavanofunga uye nezvavanofunga.
1.slewing mhete giya zvinodiwa
Iyo yekubata uye kukotama kwesimba kwemagiya pasi pekupedzisira uye kuneta mitoro yakaverengerwa nekusimbiswa zvinoenderana neIO6336-1: 2006, ISO6336-2: 2006 uye ISO6336-3: 2006 zvichiteerana. Sf iri 1.48 uye giya pajira riya clearance inogadziridzwa kune yepamusoro soro renzvimbo rinobuda kunze kweye slewing inotakura giya pombi denderedzwa. Kubviswa kwemazino kushoma kunowanzoitwa 0.03 kusvika ku0.04x modulus, uye giya mesh clearance yemapinion magiya padenderedzwa rese rinoda kuongororwa zvekare mushure mekumhanyisa kwekupedzisira kwekutakura kwekuuraya.
2. Slewing inobereka lubrication yemukati
Mukushandisa kwemazuva ese kunofanirwa kunge kuri panguva yakakodzera, nenguva, zvinoenderana nebhuku rekurairidza rechinhu chimwe nechimwe zvinoenderana nemafuta, lubrication, lubrication kutenderera zvigadzirwa zvekuzora. Inoenderanabhora slewing mhete inowanzo zadzikiswa maawa ese e100 ekushanda, roller yekucheka mhete inozadzikiswa yega yega maawa makumi mashanu, yeguruva, yakanyanya mwando, yakanyanya tembiricha musiyano weiyo yakakosha yekushanda nharaunda inofanira kupfupisa iyo lubrication kutenderera. Mafuta ega ega anofanira kuzadza mugwagwa kudzamara girizi yacho yabuda, ichizadza ichitenderedza zvishoma nezvishoma iyo inotakurika kuitira kuti girizi rizadzike zvakaenzana. Nekuzadza iyo yekuzora mafuta ekugadzirisa, inogona kudzikisa kukakavara pakati pegear pair, inononoka kupfeka mwero wegear mhete, kuumbwa kweiyo firimu yemafuta kunogona zvakare kuita basa rekuvhunduka kwekutora mhete, kubvisa chikamu cheiyo vibration simba inogadzirwa mukushanda. Uye zvakare, iyo lubricating mafuta firimu inogona zvakare kuve yakanaka lubricating kuchenesa kukweshesana pamusoro, kudzivirira ngura, uye kubvisa simba remasimbi particles pane yekukweshera pamusoro. Saka kuti udzikise ruzha ruzha mukushanda uye nekuwedzera hupenyu hwebasa rekutakura mbichana.
Iko kubatanidza mabhaudhi ekutakura kwekusimudza uye kwekumusoro nekudzika slewing kubereka kunoiswa kune axial pulsating mutoro mukuwedzera kune preload, izvo zvinoita kuti mabhaudhi atatamiswe kana iyo yekubatana pamusoro ive yakaremara, zvichikonzera kuti mabhaudhi asununguke. Bolt yakabatana inosunungura preload haisvike kune inodiwa axial clearance inowedzera, kutenderera muviri neakakura kupidigura torque kutenderera, mujaho muganho nekukura kwekusangana kwekushushikana, zvichikonzera mugwagwa nzira kumucheto kukuvara. Guta raive neQTZ 25 tower crane yepamusoro mamiriro ekupidigura tsaona, chikonzero chakanangana nekutakura uye yekumusoro yekuuraya mabhaudhi mune zvisina kutaurwa mamiriro ebasa, zvichikonzera boka rega rega bhaudhi, zvichiteerana kuitiswa zvinopfuura kutakura kwaro. chinzvimbo cheboka bhaudhi. Izvi zvakakonzera chimiro chepamusoro cheshongwe (nekutakura kwayo) kutsemuka kubva kune iyo shongwe dhizaini uye kudonhedza pamusoro. Iyo inosimudza yekutakura bhaudhi inosimbisa uye kusimba kwayo nhanho kusarudzwa kwakakosha kwazvo. Naizvozvo, iyo inosimudza inobereka bhaudhi inosunga uye kwayo simba renhanho kusarudzwa kwakakosha kwazvo.
4. Kuisa uye Kushanda
Kuisirwa rin'i rinosungirwa rinofanira kusarudzwa nemasimba akasimba mabhaudhi, mabhaudhi uye nzungu zvinofanirwa kutevedzera GB3098.1 uye GB3098.2 zviyero zvinodiwa zvinorambidza kushandiswa kweanowachira echirimo. Usati waomesa mabhaudhi ekumisikidza, iyo sizing giya meshing kugadziridza (divi clearance) inofanirwa kuitwa kuitira kuona kuti iyo slewing inobereka uye pinion mesh inosangana nezvinodiwa. Simbisa mabhaudhi anosimudza anofanira kunge ari pa180 °, iyo yekumisikidza ndege inofanira kuve yakachena uye yakati sandara, isina mabhureni, shavings yesimbi uye mamwe marara, iyo ndege inofanira kusangana nezvinodiwa.
Shongwe Crane slewing mhete mukushanda inowanzove iinewo akavhunika mazino kutadza, saka iyo shongwe kireni mukushanda inofanirwa zvakare kufunga nezvemhepo inokanganisa pane iyo slewing mhete, kana kupfuura yakatarwa mhepo oparesheni kana kumisa mashandiro mushure meiyo crane boom haigone kutenderera zvakasununguka nemhepo, izvi zvinogona kukuvadza giya uye iyo inobata inobata kubatanidzwa kana yekucheka mhete, tsaona yakakomba ichaitika. Saka iyo shongwe crane mune yekumisikidza uye mashandiro inofanirwa kuita yakadzama kuongorora.